Ny fisokafana, ny fandraisana an-tanana, ny fahatokisan-tena ary ny fitsinjovana ny maso no fihetsika asehontsika, ny teny sy ny asa ataontsika dia fampanantenantsika, ary ny vokatr'izany dia ny fitsapana ny fenitra arahintsika.
Ny headset manana kalitao avo lenta dia tsy afaka miaro ny sofintsika amin'ny fomba mahomby, fa ny tena zava-dehibe, ny kalitaon'ny feo entiny dia mety hahatonga ny sofinao ho bevohoka ao anatin'ny minitra vitsy. Amin'izao fotoana izao, ny mozika dia nanjary iray amin'ireo fomba famongorana farany, ary fitaovana ho an'ny fifantohana aza.
Ho an'ny tanora maoderina, inona no atao hoe headset? Ny earphone dia singa iray an'ny fanovana. Manaiky ny mari-pamantarana herinaratra nalefan'ny mpampita haino aman-jery na mpandray izy, ary mamadika azy ho onjam-peo heno amin'ny alàlan'ny mpandahateny akaiky ny sofina. Ny lohan-doha amin'ny ankapobeny dia azo esorina amin'ny mpilalao media ary mifandray amin'ny plug. Ny tombony dia azonao atao ny mihaino ny feo irery nefa tsy misy fiatraikany amin'ny hafa; na ny feon'ny tontolo iainana manodidina. Ho an'ny studio fandraisam-peo, fisotroana, fitsangatsanganana, fanatanjahantena sns ...
Fialam-boly isan'andro: amin'ny fiainana andavanandro, izay tsy manana fialamboly kely ho azy, ny filalaovana fandaharana amin'ny fahitalavitra sy filalaovana dia hetsika fialamboly isan'andro. Raha te hanana traikefa fialam-boly tsaratsara kokoa ianao, dia milentika amin'ny tontolo misy anao. Safidio avy eo ny headphones izay misy insulated feo tsara kokoa. Ny earphones amin'ny ankapobeny dia manana fonon-tsofina mampihetsi-po izay mamono ny sofina, izay afaka manasaraka mafy ny tabataba ivelany, mitondra traikefa anaovan-tena tsara amin'ny fihenan'ny tabataba ary hampiasana ny saina hampiasaina.
Ny mozika vaovao dia mankafy ny headset headset-E300
Ny fampiharana manokana tafiditra amin'ny lohahevitra an-tariby tsy misy indostrialy dia misy ireto manaraka ireto: fananganana tranokala toy ny fitaovana fampiakarana ambony, mpiasan'ny fiaramanidina, indostrian'ny varotra, fiarovana afo, fitrandrahana solika ary fitrandrahana harena ankibon'ny tany, fiofanana sy fotoana hafa. Ireo tranga ireo amin'ny ankapobeny dia manana ireto toetra manaraka ireto: mety misy ambaratonga sasany amin'ny loza, na ny lesoka amin'ny fandidiana dia hitondra vokany tsy ampoizina, ny vaovao dia gras ...
Ny headphones dia fitaovana fanovana elektro-akustika izay mamadika ireo feo elektrika ho lasa feo. Misy rafitra roa-fantsona sy fantsona maro ao amin'ny kanto teo aloha, na dia mazava be aza ny fizarana feo sy sary. Saingy miparitaka amin'ny tsipika na fiaramanidina izy ireo, ny rafitra stereo feno dia tokony ho rafitra fanamafisam-peo manodidina izay misy habaka telo-habe. Stereo telo-habe dia ampitaina ary averina amina rafitra misy fantsona efatra. Amin'izao fotoana izao dia tokony ...
Ny mozika vaovao dia mankafy ny headset headset-R200
Inona no atao hoe headset mahatoky avo? Ny zava-bita lehibe indrindra an'ny headset mahatoky avo lenta natolotray ao amin'ny antontan-taratasy International Electrotechnical Commission IEC581-10 dia: ny elanelam-potoana dia tsy latsaky ny 50Hz-12500Hz, ary ny valiny matetika an'ny headset ankehitriny dia manodidina ny 5-45,000Hz; ny lesoka azo ekena amin'ny valin'ny mahazatra matetika dia tsara sy ratsy 3dB; ny tehezan'ilay fiolahana valiny matetika dia tsy mihoatra ny 9dB isaky ny oktave; ao anatin'ny 250Hz-800Hz, ny fahasamihafana dia ...
Rehefa eo am-pelatanana ny headset dia tsy maintsy midera ny headset aloha isika. Noho io antony io dia mino aho fa ho fantatry ny rehetra raha tsy nolazaiko izany. Azontsika atao ny mankafy azy aorian'ny fankatoavana azy, saingy tsy mandeha tsara ve ny zava-drehetra raha toa ka mitehaka izy? Tsia ny valiny, ny kalitaon'ny earphones sasany dia tena tsara, satria matetika isika dia mampiasa ny sofina malalantsika ary maty aloha loatra satria tsy mitandrina amin'ny fampiasana azy! Ireto misy toe-javatra mahazatra amin'ny fanamboarana headphones, ary homeko anao ...
Ny mozika vaovao dia mankafy ny headset headset-R600